Le ndondo ixhaswe ababengabafundi basenyuvesi be-Canon Collins Scholarship.
Abaklomelayo bakhethwa ababengabafundi ukuze bakhethe futhi baseke abafundi abasebenza ngokuzimisela ababonakala njengabakhombisa ukuzimisela futhi ababamba iqhaza kumbono wesikhwama womphakathi ovulelekile nonobulungiswa.’
‘Ukuhlomula ngale ndondo kuyimpumelelo enkulu. Kuyangikhuthaza ukuthi ngenze okungaphezu kwalokhu. Bengingeke ngikwenze lokhu ngaphandle kosizo longumeluleki wami, uSolwazi David Spurrett,’ kusho uMsimang.
Ucwaningo lwakhe lweMastazi luhlola ukuhlaziywa kwethiyori yemiphakathi yezinhlanga mayelana nezezinkolelo. ‘IMastazi yami ibheka izinkinga ezihambelana nezobuhlanga nokuthi kungani amathiyori ngezobuhlanga engaba wusizo ekwelekeleleni ukuqonda ngalesi sihloko. Ezifundweni zami ngaphinde ngabheka ukukhula kwezinhlelo zokuqonda lapho bengigxile ekutholeni ukuthi izitshalo zinamthelela muni ekuqondeni.’
Ekhuluma ngokubaluleka kwemifundaze efana ne-Canon Collins Scholarship, uthe: ‘le mifundaze ivala isikhala sokuxhaswa ngezimali esisala sivulekile ezikhungweni zethu. Lemifundaze inika abafundi ithuba lokuba bakwazi ukukhokhela izifundo zabo futhi bagxile ezifundweni zabo. Lokhu kuxhaswa sekungikhulule emsebenzini ebengiwenza eceleni futhi manje sengigxile ocwaningweni. Ukuphikelela ukusebenzela impokophelo yakho kuyasiza kakhulu. Ngiyabonga, kwabakwa- Canon Collins.’
UMsimang useshicilele kaningana kumajenali abuyekeziwe, lapho ebhala ngezihloko ezihlanganisa imethafiziksi kanye nesifundozimpawu.
Ubuye athole nesikhathi sokulungiselela ucwaningo lwakhe lweziqu zobudokotela, ezinesihloko esihlokweni sokuqonda nokumelwa kanye nesifundongqondo ngamakhono ezitshalo.
Ibhalwe ngu: Melissa Mungroo
Izithombe ngu: Melissa Mungroo